Changu " Journey-Assist - Torapasika, fialam-boly, sary
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Chang
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Canggu
Ity faritra ity dia manomboka fiara 15 minitra miala ny tanànan'i Seminyak ary any avaratr'i Kuta no misy azy. Ny mampiavaka an'i Changu dia ny atmosfera milamina, tsy misy tabataba. Marihina fa ankoatry ny mponina ao an-toerana dia mipetraka eto ny mpivahiny. Betsaka amin'izy ireo no efa nipetraka elaela tany Canggu.
Klub beach amoron-tsiraka
Ny morontsiraka eto dia eo amin'ny 10 km eo ho eo, ary ny ranomasina eto dia asiana onja mety tsara amin'ny fisafoana. Ity dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra amin'ny surfing eran'ny nosy manontolo. Ary eo amin'ny toerana misy ny mpisera, dia misy fialamboly!
Fotodrafitrasa ao Canggu
Ity faritra ity dia manana izay ilainao amin'ny fiainana - trano, villa, hotely, trano fandraisam-bahiny amin'ny vidiny samihafa, tsy lavitra ny ranomasina ary milevina ao anaty tanimbary. Ny tsirairay dia afaka mahita ny fikarakarana sakafo araka izay itiavany azy ary mifanaraka amin'ny fahaizany ara-bola.
Misy koa ny toeram-pivarotana lehibe, klioba fanatanjahantena, spas, surfing sy surf eny Canggu (saingy iray ihany no misy tobin-tserasera Rosiana ao amin'ilay faritra; antsoina hoe Wavehouse izy io). Misy koa be sy tsy feno tora-pasika eo, izay misy ny fasika misy volkano.
Surfing ao Canggu
Eto ianao dia afaka mahita loharanon-dranomasina amin'ny ambaratonga samihafa. Canggu mety amin'ny fisafoana. Na izany aza, ny mpikaroka za-draharaha dia afaka mahita onja izay mifanentana amin'ny haavony. Ny faritra Seminyak sy Canggu dia tena akaiky koa. Ny toerana any avaratry Canggu dia somary feno olona noho ny faritra atsimo. Tsara tarehy manokana ny Eco Beach. Ao amin'ny faritaniny misy toeram-pisakafoanana iray izay ahafahanao mankafy ny mpandety sy ny filentehan'ny masoandro eo amin'ny latabatra, manandrana sakafo an-tsakafo mahafinaritra.
Isaky ny alahady alina dia manao fety miaraka amin'ny mozika mivantana i Deus. Deus dia fivarotana bisikileta fanta-daza malaza misy galerie, trano fisakafoanana ary fiakarana skateboarding mini.
Tranon-tsoavaly Surf Deus. Deus ex machina
Fivarotana bisikileta Surf. Deus ex machina
Misy fety amin'ny alina ao amin'ny Sand Bar, Pretty Poison ary ny Old Man's.
Fiara na bisikileta 20 minitra mankany avaratra manaraka ny lalambe Canggu lehibe no misy ny Tempolin'i Tana Lot mahavariana, izay mijanona eo ambonin'ny rano. Iray amin'ireo Tempoly 9 manan-danja indrindra any Bali. Ny eo akaikiny dia maro koa no mihaona amin'ny masoandro mody. Manodidina ny moron-dranomasina.
Weather in Canggu androany
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Haidraka, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any amin'ny faritra Canggu. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.